सुत्नुअघि गर्नुहुँदैन यी ५ गल्ति ! « Lokpath
२०७७, १५ मङ्सिर सोमवार १८:४९
प्रकाशित मिति : २०७७, १५ मङ्सिर सोमवार १८:४९
काठमाडौं – धेरै मानिसहरु ओच्छ्यानमा गएपछि पनि निन्द्रा नलागेको, निन्द्रा लागेतापनि बेलाबेलामा ब्युझिरहने, छट्पटि, मध्यरातमा निन्द्रा खुलेर हैरान भएको जस्ता समस्याबाट प्रभावित छन् । यस प्रकारका समस्या पछाडि धेरै कारण जोडीएका हुनसक्छन् । तर निद्रा नआउनुमा केही गलत बानी पनि कारण हुन सक्छन् । यस्ता समस्या हुनेहरुको समाधानका लागि चिकित्सकले केहि सुझाव दिएका छन् ।
सुत्ने बेलामा मोबाईलको प्रयोग गर्नुहुँदैन : बिहान आँखा खुलेदेखि राति आँखा बन्द नहुन्जेलसम्म धेरै मानिसहरु मोबाइलमा नै झुण्डिरहेका हुन्छन् । यदी माथिका समस्या छन् भने तपाईले यो बानी सुधार्नुपर्छ । किनकी यसले निद्रा बिगारिदिन्छ ।
सुत्नेबेला अघिसम्म कडा काम गर्ने गर्नुहुँदैन : सुत्नुअघिसम्म हार्ड वर्क गर्ने बानीले पनि तपाईंलाई राम्रो निद्रा पर्दैन ।
अनेकन कुरा मनमा खेलाउनु हुँदैन : नेपाली उखानै छ, “खाँदा घिन नसम्झनू, सुत्दा रिन नसम्झनू ।” हो सुत्नेबेलामा अनेकन तर्कना आउँदा पनि दिमागलाई असर गर्छ । र तनाव थपिन्छ । तयसैले सुत्नेबेलामा मनमा कुरा नखेलाउनुस् ।
राति कफि पिउने बानी त्याग्नुहोस् : बिशेष गरी विद्यार्थी वर्ग यो लतमा हुन्छन् । अलिक पढनदास विद्यार्थीहरुमा यो लत अझै बढी हुन्छ । तर राति चिया कफी पिउँदा राम्रो निद्रा लाग्दैन । विशेषगरी लेखक वर्ग पनि राति अचानक ब्युझिने जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । त्यसैले यो बानी त्याग्नुपर्छ ।
सन्तुलित गराउने : राति समयमा सुत्ने बिहान समयमा उठ्ने बानी बसाउनुस् । यसो गर्दा पूर्ण निद्रा पाउनुहुन्छ । शरीरमा पनि स्फूर्ति हुन्छ ।
अनुहारको कालो दागधब्बा यसरी हटाउनुहोस् (२४ घरेलु उपायसहित)
काठमाडौं – स्वभाविक रुपमा चिसोयाममा छालाको कान्ति केहि घटेको हुन्छ । कतिपयको छालामा
काखीमा धेरै कालो दाग बसेको छ ? हुनसक्छ यस्तो संकेत !
काठमाडौं – के तपाईको काखी (अन्डरआर्मस् ) मा कालो दाग छ ? वा
आँखा वरिपरी ‘डार्क सर्कल’ छ ? भान्छाको यी औषधि प्रयोग गर्नुहोस् (टिप्ससहित)
काठमाडौं – के तपाईको आँखा वरिपरी ‘डार्क सर्कल’ छ ? धेरै मानिसहरुको साझा
कसरी बढाउने ‘ईम्युनिटी पावर’, खानैपर्छ यी कुरा !
काठमाडौं – हरेक खाले रोगबाट बच्न शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुनुपर्छ ।